वैद्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊ – Dainik Lumbini
महात्मा गान्धीको हत्या गर्ने नाथुराम गोड्से जस्तै आफू बन्न तयार रहेको भन्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य विवादमा तानिएका छन् । उनले प्रदेशसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रति लक्षित गरेर हत्या गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् । बुझ्नु पर्ने के छ भने नाथुराम गोड्से भारत पिताका रुपमा चिनिएका महात्मा गान्धीका हत्यारा हुन् । भारतीय इतिहासमा गोड्से कुख्यात हत्याराका रुपमा चिनिन्छन् । हत्याको सम्बन्धमा एक वर्ष लामो परीक्षणपछि गोड्सेलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
नेपालमा गोड्से जस्तै आफू बन्न तयार रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य जस्तो ओहोदामा रहेका व्यक्ति हुन् । अर्थात उनी जनप्रतिनिधि हुन् । त्यति मात्र होइन, उनी कानून निर्माण गर्ने थलोका एक जिम्मेवार व्यक्ति समेत हुन् । तर विडम्बना प्रदेशसभा बैठकमै उनले गोड्से बन्नेसम्मको आपत्तिजनक र घिनलाग्दो अभिव्यक्तिले प्रदेशसभाको शीर निहुँरिएको छ । जनताको घोर अपमान भएको छ । कानूनको धज्जी उडाइएको छ ।
एउटा प्रदेशसभा सदस्यलाई खुलेआम हत्या गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिने हिम्मत कहाँबाट आयो ? हाम्रो समाजले कस्ता जनप्रतिनिधि उत्पादन गरिरहेको छ ? सवाल अनेक उब्जिएका छन् । हुनत वैद्यले आवेसमा आएर बोलेको भन्दै माफी मागेका छन् । तर प्रदेशसभा सदस्य भएको व्यक्तिले के बोल्न हुन्छ, के हुँदैन भनेर हेक्का राख्न सक्दैन ? जति नै आवेसमा आएपनि संसदीय गरिमा र मर्यादालाई कुल्चिन मिल्छ ? मिल्दैन ।
प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले जुनप्रकारको अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसले कानूनी राजको उपहास गरेको छ । उनले सांकेतिक रुपमा हत्या गर्नेसम्मको जुन धम्की दिए, यसले गुण्डाराजलाई स्थापित गर्न बल पुगेको छ । यिनी जुनसुकै आस्था वा विचार राखेपनि राजनीतिका नाममा कलंक सावित भएका छन् । नेपालको कानूनले कसैलाई खुलेयाम हत्या गर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिने छुट दिएको छैन ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले दिएको अभिव्यक्तिलाई कसैले पनि सामान्य रुपमा हेर्नु हुँदैन । महात्मा गान्धीलाई जस्तै बनाउँछु भन्ने कुरालाई कानूनी कारबाहीको विषय बनाइनु पर्दछ । सामान्य माफी माग्दैमा छुट दिइनु हुँदैन । कानून हातमा लिने र लिन्छु भन्ने दुवै अपराधी हुन् । यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न जो सुकै होस् कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीसंग चित्त नबुझेको होला, त्यसमा फरक मत राख्न पाइन्छ । उनको विरोध पनि गर्न पाइन्छ । संसदीय परम्परामा समर्थन र विरोधलाई जायज ठानिन्छ । त्यही भएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संविधानतःव्यवस्था गरिएको हो । यसमा पनि आ–आफ्ना सीमा र मर्यादा छन् । तर प्रदेशसभा सदस्य वैद्य यी सबै सीमालाई कुल्चिएर संविधानलाई धुजा–धुजा पारेका छन् । प्रदेशसभाको गरिमा र कद घटाएका छन् । त्यसैले उनलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्दछ । उनी कारबाही भोग्न लायक छन् ।
बहाव क्षेत्र अतिक्रमणले बस्ती जोखिममा
उपचार नपाउने अवस्था अन्त्य गर